Nolosha qalabku waxay ahayd qodob muhiim ah oo saamaynaya faa iidada qofka irbadda sameeya. Haddii habab macquul ah loo isticmaali karo in lagu sameeyo nolosha caaryada wixii ka baxsan shuruudaha naqshadeynta, markaa faa'iidada shirkadda si weyn ayaa loo horumarin doonaa. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha lagu hagaajiyo nolosha caaryada. 1. Sax ...
Seddex shey oo aadan iska indha tiri karin markaad tixraacayso sameynta caaryada
Iyadoo 20 + sano 'waayo-aragnimo ah ee samaynta caaryada caagga ah iyo wax soo saarka qayb caag ah, YF Mold wuxuu leeyahay naqshad injineernimo khibrad leh iyo koox qalab sameeye ah. Waxaan ku dadaalnaa inaan la kulanno oo aan dhaafno yoolalka iyo rajooyinka macaamiisheenna. Inta lagu jiro sameynta caaryada, sedex shey oo aan ubaahan nahay inaan fiiro gaar ah u leenahay 1. Kama ...
Maanta, kooxdayadu waxay si diirran u soo dhoweeyeen Jan, oo ah agaasimaha guud ee shirkad caalami ah oo Beljim ah iyo kooxdiisa oo ay ku jiraan injineerada naqshadeynta wax soo saarka, maamuleyaasha wax iibsashada iyo injineerada mashruuca warshadeenna. Iyadoo shuruudaha xirfadeed iyo adag, waxay revi ...
Warshadda caaryada, Wax taaj oo kale duritaanka Iyadoo bir biraha, Samaynta Qaab Muunad, Caaryada Custom, Soosaarayaasha caaryada, Wax taaj oo kale galinta caaga ah,